Wadahadalo La Damacsan yahay in Lagu Damiyo Mashaqada ka Aloosan Qaza - Cakaara News
Wadahadalo La Damacsan yahay in Lagu Damiyo Mashaqada ka Aloosan Qaza
Qahira(CN) Sabti August 02-2014.Madaxweynaha Masar, Abdulfatah Al-sisi ayaa sheegay in xabbad joojintii uu dalkiisa dhawaan soo bandhigay, ay ahayd mid wax ku ool ah oo colaadda Qaza lagu damin karay. Waxaa uu weriyayaasha u sheegay in aanay jirin wax lagu bedeli karo qorshaha xabbad joojinta ee Masar.
Afhayeen u hadlay Xamaas ayaa sheegay in wefdi ka socda Falastiiniyiinta uu maanta gaari doono caasimada dalka Masar ee Al-Qaahira. Wakiillo ka socda Mareykanka, Qadar iyo Turkiga ayaa sidoo kale la filayaa in ay ka qeybgalaan wadahadalka, mana cadda in Israa'iil ay tegi doonto wadaxaajoodkaasi iyo inkale.
Saraakiisha caafimaadka ee Qaza ayaa sheegaya in Falastiinyiin ay tiradooda ka badan tahay 100 qof lagu dilay duqeynta Israa'iil tani iyo markii ay burburtay xabbad joojintii koobneyd ee Jimcihii shalay.
Goor sii horreysana, milateriga Israa'iil ayaa sheegay in qalabkooda ka hortaga gantaallada ee Iron Dome uu burburiyay laba gantaal oo lagu soo riday magaalooyinka Tel Aviv iyo Beersheba.